June 14, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 4
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulahi Deni Ayaa Bahdiley Jubbaland Iyo galmusug Kadib Markii uu Diidey Inuu Nairobi Uga Qeyb galo Shirkii maamul Goboleedyada Dalka.
Madaxweynaha Puuntland oo lagu wadey Inuu nairobi tago Ayaana Tagin waxaana uu Dib Ugu laabtay Garoowe Isagoona Diidey In Shir Nairobi lagu Qabto.
Siciid Deni Puntland ayuu jaa ku fashilmay oo uu hantideeda qaran ee ah kaabeyaasheeda dhaqaale ee aasaasiga ah ka xaraashay Itoobiya oo Soomaaliya u ah nacab soojireen ahaa oo hadda na in ay bulsho iyo dhaqaale ahaan ku dhaxal wareejisato soo qorsheysatay.
Hantida qaran ee Puntland ee uu Deni cadawga u gacan galiyay waxaa ka mid ah adeegyada duulimaadyada oo runtii nagu noqotay wax aad loo la fajaco. Waxaa kale oo u saxiixay badda Puntland oo ay gacanta ku dhigayso wasaaradda difaaca ee Itoobiya.
Waxaa hadda ba yaab iyo amankaag nagu noqday sababta uu Deni inta shirkado iyo dalal muslim ah ee dunida dhooban uu cadawgan soojireenka ah hantida qaran ee Puntland ugu gacan galiyay.
Waxaa iyana cambaar samada ka muuqata madaxda Puntland ku noqotay damiir xumada u diidday in ay beesha Gahayle ee Siwaaqroon deegaankooda ay Sanaag ku leeyihiin ugu soo dhicin waayeen 20kii sano ee ay hoggaanka Puntland isku kakabinayeen.
Sow waajibkiisu ma ahayn in uu ganacsata waaweyn ee Puntland ku abtirsada inta uu shirkad qudh ah ku mideeyo ay deeto maamulku iyo iyagu isla maalgashadaan kaabeyaashan dhaqaale ee uu ajnabiga u hibeeyay?
Maxaa ka madoobeeyay in uu xataa shirkada duulimaadyada ee ay Soomaalidu leedahay qandaraaskaas siiyo?
Cabdi Weli Gaas sidiisii buu diyaaradaha u saaran yahay oo wax ay soo kordhiyeen lama hayo.
@ Boqoradda Gabar Harti,
Walaal hadda ayaan arkay jawaabo qiimo badan oo aad bogag hore iigu dhaaftay. Runtii kun nin baad ka geesisan tahay oo aad ka garasho iyo garaad wacan tahay ina boqoreey. Kalsoonidaadu na waa mid lagu cibra qaato xaqiiqdii. Waa u dhalasho ee Eebbaheen ha kuu barakeeyo.
Ku dheeran maayo ee waxaa kali ah oo aan hoosta ka xardhayaa in sideeda ba bulshadu uu caafimaadku ugu jiro qaladaadka hoggaamineed iyo meelaha ay arrimihu ka dhabqeen oo toos nalka loogu ifiyo si loo tabo oo looga wada xaajoodo oo deeto xalalka ku habboon lagu saxo.
Dad bay dhibtaa in ay tolkooda waxa ka qaldamay ka faalloodaan oo iska jacel in sidaas waxii jira lagu dado oo qaar baa dulmi kuwa la haybta ah ku taageersan iyaga oo xaqa iyo caddaaladda is inkirsiinaya. Halkan ayay ba dhooban yihiin kuwa noocaas ahi oo waa kuwa qofka aan runta iyo xaqa dadin u arka ruux maryaha dhigtay.
Anigu olole xooggan baan hadda xubin ka ahay oo wax badan baa dhawaan isbaddali doona haddii Eebbe ka raalli noqdo. Tolku kuwa ka dhashay ee wax ku dhaama ayay baahi xun u qabaan oo sidan lagu ma sii eegan karo.
Caasha basbaasooy is deji indrteey, mee ki daaree adi?maryooleey waa maryooleey,nin tuugsi ku nool nin kale uma tuugsi tago, yacni Iidoor oo beer si loo suubisto aqoon, si kaluun loo la soo baxo aqoon, galleey khaaistay tuugsada,gacmaha hoorsada,magan allaay magan gaalo ku nool nin kale oo la deegaan ah maa gumeyn karo al yacni eeh, ma dhihi karo anigaa kuu barya tagaya wixii aan soo helo wax kaa siinayaa !!!! Somalinimadii hadda waxay joogtaa in la isugu faano anigaa kaa badiya sida wax loo baryootamo.anigaa wax kuu soo baryaayo wixii aan soo helo wax yar ayaan kaa siinayaa ama waxba kuma siinayo,sidaa igu raac ama waa ku dilayaa ayey maraysaa.si kastaba haa ahaato nin rag ah ciil cadaab ayuu ka doortay.
Cismaanoow goormaad oran doontaa ninkaasu waa masuul masuuliyad lagu aamini karo?Kuwii ka horeeyey Deni baad ka dayrin jirtey.Isagiina waad raacisay ee yaan aaminaa?